आउँदो असारसम्म सम्पन्न हुने गरी कोटेश्वर–जडीबुटी सडक निर्माण सुरु – Nepal Japan
३ आश्विन २०७८, आईतवार
आउँदो असारसम्म सम्पन्न हुने गरी कोटेश्वर–जडीबुटी सडक निर्माण सुरु
नेपाल जापान ५ माघ १४:१८
काठमाडौँ उपत्यकामा सवारीसाधनको चाप बढी हुने सडकमा पर्ने कोटेश्वर–जडीबुटी सडक बिस्तार अघि बढेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँले आगामी असारसम्ममा सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको जनाएको छ ।
सो सडकमा निर्माणस्थल खाली भएसँगै निर्माण अघि बढाउन लागिएको हो । हालसम्म सो सडकको निर्माणको काम सात प्रतिशत सकिएको डिभिजन प्रमुख कुबेर नेपालीले बताउनुभयो । टुन्डी सुसन जेभिसँग सो सडकको निर्माण छ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सडकका लागि रु १२ करोड छुट्याइएकामा रु आठ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सडकमा तीन लेन थपेर बिस्तार गरिनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “कोटेश्वरबाट जडीबुटीतर्फ जाँदा दायाँ दुई लेन र बायाँ एक लेन थप गर्न लागिएको छ ।”
सो सडकमा विस्तारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाल चार लेन रहेकामा तीन लेन थप्न संरचना हटाउने काम अघि बढेको छ । उक्त सडकमा तीन लेन थपिएपछि यहाँको सवारी चाप केही कम हुनेछ । डिभिजनले गत भदौदेखि सडकका दुवैतर्फको निर्माणस्थल खाली गरिरहेको जनाएको छ । देशभरका अधिकांश सडक निर्माणमा त्यहाँ रहेका पूर्वाधार हटाउँदै काम अघि बढाइएको प्रमुख नेपालीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संरचना हटिसकेपछि निर्माणको काम सरासर अघि बढ्न सक्नेछ ।”
सडक निर्माणका क्रममा विमानस्थलको सुरक्षालाई ध्यान दिइएको छ । बाहिरी बारलाई पहिले स्थानान्तरण गरिसकेपछि मात्रै अहिलेको बार भत्काइएको हो । विमानस्थलले सडक चौडा गर्न सहमति दिएसँगै सडक विस्तारलाई बाटो खुलेको थियो । अहिले उत्तरतर्फको एउटा घरका कारण निर्माणस्थल खाली हुन नसक्ने देखिएकाले घर धनीसँग कुरा भइरहेको र सहमतिमा ल्याएर जग्गा उपलब्ध गराउनेतर्फ प्रयास भइरहेको छ ।
सडक निर्माणको केही समयमा भत्काउन नपरोस् भनी सडकमा बिच्छ्याउने संरचना पहिले नै राखिनेछ । यसका लागि विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमलगायतका सेवा प्रदायक संस्थासँग समन्वयमा संरचना निर्माण भइरहेको छ । सडक निर्माणसँगै सो स्थानमा अपाङ्गतामैत्री सहितको पैदलयात्रुमार्ग र हरियाली क्षेत्र हुनेछ । त्यसपछि जडीबुटीबाट आएका सवारीसाधन कोटेश्वर हुँदै बालकुमारीतर्फ र कोटेश्वरबाट आएका जडीबुटी हुँदै पेप्सीकोलातर्फ जान रोकिने छैनन् । चोक नै पार गर्नुपर्दा केही समय रोकिए पनि चोक पार नगर्ने सवारी भने राकिने छैनन् । सो सडक आगामी दिनमा मनोहरा पुलसम्म विस्तार गर्ने योजना छ ।
सामान्य अवस्थामा यो सडकमा लामो समयसम्म जाम हुँदा यात्रु र सवारीचालक हैरान थिए । तीनकुनेबाट लोकन्थलीसम्म नै जाम हुँदा नागरिकलाई केही किमी यात्रा गर्न घण्टौँ लाग्ने गरेको थियो । अहिलेको सडक विस्तार अल्पकालीन समाधान भए पनि दीर्घकालीन रुपमा यसको समाधान ‘अण्डर पास’ वा ‘फ्लाई ओभर’ नै भएको सडक विभागले बताउँदै आएको छ । यी संरचना बन्न अझै केही वर्ष लाग्नेछ । तीनकुने–सूर्यविनायक सडक विस्तार गरेको जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका) ले सो स्थानमा ‘फ्लाई ओभर’ वा ‘अण्डर पास’ निर्माणका लागि अध्ययन गरिसकेको छ ।
“प्रसारण लाइन नहुँदा विद्युत खपत बढाउन सकिएन”
साताको शेयर बजारः ३८ अर्बको कारोबार
नेपाल र बंगलादेशको लगानीमा बन्ने भो सुनकोशी–तेस्रो, अघि बढ्यो प्रक्रिया
पोखरा महानगरपालिकाको बजेट खर्च ६६ प्रतिशत
ओमानमाथि नेपालको ठूलो अन्तरको जित
४ आश्विन ००:२४
ओमान सस्तैमा समेटियो, नेपालले- पायो १२२ रनको लक्ष्य
३ आश्विन २२:१५
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीद्वारा इन्द्रजात्रा अवलोकन
३ आश्विन २१:४२
माधव नेपालद्वारा यसै साता सरकारमा जाने घोषणा
३ आश्विन २१:३३
छाप्रामै थलिए राउटे
३ आश्विन २१:१३
१. अमिताभको “उचाई”को छायाङ्कनका लागि बलिउड टोली मनाङमा
२. ओहायोमा आगलागी एकैघरका पाँचजना नेपाली भाषीको मृत्यु
३. दैलेख सफाइ अभियान शुभारम्भ- पूर्वमन्त्री शाही झाडु बोकी सडकमा
४. जोसंग विवाद हो उहीसंग बैठक बसेर निकास निस्कन्छ ?
५. ७० वर्षको उमेर हद लागू गरिएपछि नयाँ पुस्तामा नेतृत्व
६. “एमसीसी अनुमोदन नभए पनि सम्बन्धमा कुनै असर पर्नेछैन” : उपाध्यक्ष फतेमा
७. उच्च हिमाली गाउँको बहुपति प्रथामा आधारित चलचित्र ‘टुल्की’